ဝယ်ထားတဲ့ CONDO မကောင်းကြောင်းရေးတင်မိရမှ တရားစွဲခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်(ရုပ်သံ)
ဝယ်ထားတဲ့ CONDO မကောင်းကြောင်းရေးတင်မိရမှ တရားစွဲခံလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ရပ်(ရုပ်သံ) ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ FB စာမျက်နှာမှာ ဂရက်ရိုက်နေတဲ့ Condo ကိစ္စလေးကို တင်ပြပေးပါ့မယ်နော်။ ယခုရက်ပိုင်းမှာ Facebook စာမျက်နှာမှာ Condo ကိစ္စဟာ လူပြောများနေတာ ဖြစ်ပါတယ် …. ။ ဝယ်ထားတဲ့ Condo က အဆင်မပြေမှုတွေ […]
မြန်မာနိုင်ငံ ကျွမ်းဘားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်တွေကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ အလှမယ် ထားထက်ထက် သမ္မတကြီးထံသို့ ပေးစာ…… အားကစားလောကမှ တာဝန်ရှိ လူကြီးများနှင့် အားကစားလောကကို တကယ် တိုးတက်စေလိုသော လူကြီးမင်းများ သိရှိ အရေးယူနိုင်ပါစေရန်ထားထက်ထက် အနေဖြင့် ကျွမ်းဘားအားကစားကို အသက် ၅ နှစ်မှ စတင် ကစားခဲ့ပြီး ၁၀ […]
(၄)တန်း ကျောင်းသူလေးကို လူစိမ်းအမျိုးသား ၂ ဦးမှ ကျောင်းခန်းထဲအထိဝင်၍ အတင်းအဓမ္မ ဆွဲ
(၄)တန်း ကျောင်းသူလေးကို လူစိမ်းအမျိုးသား ၂ ဦးမှ ကျောင်းခန်းထဲအထိဝင်၍ အတင်းအဓမ္မ ဆွဲ စတုတ္ထတန်းကျောင်းသူတဦးကို လူစိမ်းအမျိုးသား ၂ ဦးမှ ကျောင်းခန်းထဲအထိဝင်၍ အတင်းအဓမ္မဆွဲသဖြင့် ဖမ်းဆီးအရေးယူထားကြောင်းသိရသည် … ။ ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း၊ သာယာဝတီခရိုင်၊ နတ္တလင်းမြို့နယ် ဖလံပင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖလံပင်ရွာမကျေးရွာရှိ မလတန်းကျောင်းဝင်းအတွင်း စတုတ္တတန်းကျောင်းသူတဦးကို အမည်မသိ […]
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာတွေဆီကနေ သိန်း (၇၀၀) ကျော် လိမ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး
ကိုရီးယားရောက် မြန်မာတွေဆီကနေ သိန်း (၇၀၀) ကျော် လိမ်သွားတဲ့ အမျိုးသမီး ကိုရီးယားရောက် မြန်မာလူမျိုးများ အထူး သတိထားကြပါ။ တရားဝင် ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကနေပဲ ငွေလွှဲကြပါ။ ဒီလိုမျိုး အဖြစ်အပျက်တွေ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ဖြစ်ပြီးသွားပါပြီ …. ။ ပိုပေးတဲ့ ပိုက်ဆံလေး နည်းနည်းလောက်ကို […]
ရင်နင့်ဖွယ် အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ မကွေးက အလှဘုရင်မ ချစ်ဇာ